Myanmar Android Users: Android ဖုန်းတွေအတွက် လိုအပ်တဲ့ Dictionary များ
Android ဖုန်းတွေအတွက် လိုအပ်တဲ့ Dictionary များ
အခုဖော်ပြပေးထားတာတွေကတော့ Android OSဖုန်းတွေအတွက် အဘိဓာန် ဆော့ဝဲလေးတွေ ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။Android OS အသုံးပြုသူတွေ အဆင်ပြေအောင် တခြားဆိုဒ်များမှ တဆင့် စုစည်းပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။အသုံးဝင်တဲ့ ဆော့ဝဲတွေမို့ မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။
iphone နဲ့ အခြား touch phone တွေအတွက်ပါ..လက်ရှိကျွန်တော်လည်း ဒီကောင်ကို သုံးထားပါတယ်..phone တွေအတွက် တော်တော်လေးအဆင်ပြေပါတယ်Myandroid ဆိုတာာ Myanmar and Android ပြောင်းပြီးတော့ နာမည် ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ Android platform အတွက် မြန်မာ အင်္ဂလိပ် dictionary ဖြစ်ပါတယ်။ Beta version အဖြစ်တင်ပြလိုက်ပါတယ် ။ Root လုပ်ဖို့ font install မလိုပဲ အသင့်သုံနိုင်ပါတယ်။
English – Myanmar
Total Records (17902)
Single Word and Expression
Total Records (32701)
ဒါကတော့ Android OS ဖုန်းတွေအတွက် English to Myanmar, Myanmar to English အဘိဓာန် ဆော့ဝဲလေးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
Home screen ကနေ Myanmar – English button ဒါမှမဟုတ် English – Myanmar button တစ်ခုခုကို နှိပ်လိုက်ပါ။
၂ – ၃ စက္ကန့်လောက် loading စောင့်ပါ။
Search screen ကိုရောက်ရင် ကြိုက်တဲ့ စာလုံးတွေကို ရိုက်ပြီးရှာနိုင်ပါပြီ်။
ဖုန်း Keyboard ကနေEnter Key ဒါမှ မဟုတ် Screen က Search button ကိုနှိပ်ပြီးရနိုင်ပါတယ်.
search result ထဲက list ထဲက စကားလုံးတွေကို နှိပ်ြပီးတော့လည်း ဖတ်နိုင်ပါတယ်။
frozen keyboard မှာလို eng မပြောင်းပဲ qwert အတိုင်းရိုက်ပါ ဆိုလိုတာက pc မှာ မြန်မာစာ ရိုက်သလို ရိုက်ပါ။aဆိုရင်ပေါ့။
English keyboard ကိုသုံးပြီးရိုက်ကြည့်တာ တော့ မြန်မာလို ရတယ်
change setting on ur phone…
setting___display___font style__zawgyi one TTF___
maybok
Myandroid Dictionary အားရယူရန်
To Download For Android phone
File Size က 890 KB ပဲရှိပါတယ်။ Download ပြီးပါကZip ဖြည်ပြီး MyandroidDict.apk ဖုန်းထဲထည့်ပြီး install လုပ်နိုင်ပါပြီ။
အင်္ဂလိပ်-မြန်မာ အဘိဓာန် Planet Myanmar Dictionary
ဒီဆော့ဝဲလ်လေးကတော့ Android OS phone တွေကိုအသုံးပြုနေတဲ့မိတ်ဆွေများ အတွက် english to myanmar ကို အလွယ်တကူ ဘာသာပြန်ပေးနိုင်တဲ့ Planet Myanmar Dictionary လေးပါ။ Android OS phone တွေကိုအသုံးပြုနေတဲ့မိတ်ဆွေများ အတွက် english to myanmar ကို စာတစ်လုံး ( သို့ )စာတစ်လုံးနှင့်အထက်ကို အလွယ်တကူ ဘာသာပြန်ပေးနိုင်တဲ့ Planet Myanmar Dictionary ထည်းသွင်းအသုံးပြုနိုင်တဲ့ နေရာလေးကို လမ်းညွှန်ပေးချင်ပါတယ်.ကျနော် တို့ မြန်မာနိုင်ငံသားများ အတွက် တော့ အရမ်းကို အဆင်ပြေစေမှာဖြစ်ပါတယ်. အပေါ် မှာပြထားတဲ့ပုံလေးတွေ ကို ကြည့်ခြင်း အားဖြင့် Android OS phone များကိုအသုံးပြုနေသူ မည်သူ မဆို စိတ်ဝင်စားကြမှာပါ။ သွားရှာရမည့်နေရာ ကတော့ Android OS phone ဖုန်းများရဲ့ ဆော့ဝဲလ်ပေါင်း စုစည်းရာ Android market မှာဖြစ်ပါတယ် .မိမိတို့ ဖုန်းက မည်သည့်နည်းဖြင့်မဆို အင်တာနက်ချိတ်ဆက် ထားမည်ဆိုပါက အလွယ်တကူ install လုပ်လိုက်ရုံပါဘဲ. အခုလိုမြန်မာ ပညာရှင်များပေါ်ထွက်လာတာ ကို အရမ်းကျေးဇူးတင်မိပါတယ်. မိမိအသုံး ပြု နေတဲ့ ဖုန်းက version 2.0+ အထက်တော့ရှိရပါမယ်။ ထည့်သွင်း အသုံး ပြုချင်တဲ့ မိတ်ဆွေများ အောက်မှာ လင့်ချိတ်ပေးထားပါတယ်။သုံးလို့ကောင်းတဲ့ Dictionary လေးတစ်ခုပါပဲ။ ဒီဇိုင်းလေးကလည်း နှစ်သက်ဖွယ်ဖြစ်ပါတယ်။
Planet Myanmar Dictionary <<< Download
Android ဖုန်းတွေအတွက် အင်္ဂလိပ်မြန်မာ Ornagai Dictionary
Android ဖုန်းတွေအတွက် အင်္ဂလိပ်မြန်မာ Ornagai Dictionary ကိုတင်ပေးလိုက်ပါတယ် ။ ဘယ်မှာမှ ရှာမရဘူးဆိုလို့ပါ။ အဆင်ပြေမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။
Ornagai Dictionary အားရယူရန်
Ornagai English-Myanmar mobile Dictionary For Android
Posted by navykoko at 6:37 AM
Labels: Android Application များ, Dictionary app(အဘိဓာန်များ), မြန်မာ App
ZMHtet October 24, 2012 at 7:59 AM
nay naing min March 22, 2013 at 12:04 AM
ma ei November 1, 2015 at 11:25 PM
၀မ်းဗိုက်ကြွက်သားတွေသန်မာစေဖို့6Pack Promise
Android မှာ မျက်နှာပြင်လှလှလေးသုံးချင်သူများအတွက်A...
Android ဂိမ်းဝါသနာရှင်များအတွက် Galaxy Wars Defens...
Android အသုံးပြုတဲ့သူတွေ အတွက် Paper Camera
Android ဖုန်းတွေအတွက် 3D Digital Weather Clock
Android Mobile Phone များအတွက်အကောင်းဆုံး Browser ...
Android သမားတွေအတွက် ကီးဘုတ်စတိုင်လေးပြောင်းသုံးကြ...
Android အသုံးပြုတဲ့သူတွေ အတွက်Beejive IM
Android OS Battery မခံလို့ စိတ်ညစ်နေကျတဲ့သူတွေအတွက...
Android ပေါ်မှာRynga နဲ့ဖုန်းခေါ်ကြမယ်
မိုဘိုင်းဖုန်းများတွင် VZO Chat ကဲ့သို့ ရုပ်မြင်စန...
ဂိမ်းဝါသနာရှင်များအတွက် AngryBirds Space
Samsung Galaxy Mobile ဖွဲ့ စည်းပုံလေး
Pre-Paid Phone Card စနစ်အကြောင်း
ရေစိုဖုန်း handset တွေကိုဘယ်လို ပြင်မလဲ
Android OS Setting စနစ်များအသုံးပြုခြင်း ၁
Android OS Setting စနစ်များအသုံးပြုခြင်း
Android V3.2.6 Phone များအတွက် Spider-Man Total Ma...
Face Swap Ver 1.1 For Android
Andriod ကို မြန်ဆန်စေမယ့်AutoKiller Memory Optimiz...
Open Source ရဲ့နောက်ဆုံးproduct phone os( Androi...
Linux အမျိုးအစားတစ်မျိုး ဖြစ်တဲ့ google android
Android ကို Wallpaper လန်းလန်းလေးနဲ့ အလှဆင်ကြည့်မယ...
Mobile Phones တွေဘယ်လိုအလုပ်လုပ်သလဲ
ကြောင်ကလေး Tom နဲ့ စကားပြောကြမယ် For Android
Android Phone & Tablet များအတွက် i Phone Keyboard
Android Phone & Tablet များအတွက် Window7Style An...
Touchpal Dialer စနစ် အသုံးပြုနည်း
Android Phone & Tablet များအတွက် Kingsoft Office
မိမိစိတ်ကြိုက် သီချင်းလေးတွေကို ကိုယ်တိုင် ဖုံး Ri...
20+ Android Secret Codes!!
Andriod Phone တွေအတွက် ဆော့ဝဲလ်တွေ စုံစုံလင်လင်ရှိ...
Android File Manager အသုံးပြုနည်း
Android Gmail အသုံးပြုနည်းနဲ့ Pattern Lock
Euro 2012 ဘောလုံးပွဲ ရလာဒ် ကို Android ဖုံးနဲ့ စော...
Android ကို ကွန်ပျူတာကနေပြီးScreenshots ရိုက်ကြည့်...
Android Device တစ်ခုကို အကောင်းဆုံး ထိန်းသိမ်းစောင...
Android သမားတွေအတွက် 3D Home screen/launcher အလန်း...
Android ဖုန်းတွေကနေ wifi ပြန်လွှင့်ပေးမယ့် လိုအပ်တဲ...
Android ဖုန်းတွေအတွက် Custom ROMs များ
Android အသုံးပြုသူတွေလက်ကိုင်ထားသင့် တဲ့ အကောင်းဆံ...
Android အတွက် Dictionaryများ(Eng)
Android ဖုန်းပေါ်က Browser များ
Full Screen Launcher Pro v1.3.5 for Android
Root လုပ်စရာမလို ၊မြန်မာဖောင့်သွင်းစရာမလိုဘဲ Websi...
Android OS ရဲ့ သမိုင်းကြောင်း (အပိုင်း - ၁) (ဇော်ဂ...
Android အသုံးပြုသူများအတွက် အသုံးဝင်တဲ့Marketများ
မိမိတို့ ဖုန်းBattery ကို ကြာကြာအသုံးခံအောင်Go Pow...
screen ပေါ်က icon များပေါ်တွင် မြန်မာလိုလေးရေးထားချင...
ဖုန်းနံပါတ်တွေကို Block လုပ်ပေးမယ့် Apk များ
How to connect EDGE GSM Internet network with Noki...
ပိုက်ဆံစက္ကူရွက်တွေနဲ့ ပုံလှလှလေးဖြစ်အောင် သင်ပြပေ...
သတင်းနှင့် အချက်အလက် အသစ်တွေကို အချိန်တိုတိုနဲ့ ဖတ...
မြန်မာသီချင်းများ၊တရားတော်များကို online ကနေပြီး န...
Android Camera စွမ်းဆောင်ရည်ကို ပိုမိုအစွမ်းထက်စေမ...
GPS စံနစ်က ဘာကြောင့် မှား ယွင်းဖေါ် ပြနေပါသလဲ...
မန္တလေးမြို့ သေဆုံးခြင်း Death of Mandalay - Lin L...
၂၀၁၂မှာ အကောင်းဆုံးAndroid ကင်မရာနဲ့ တွဲဘက်သုံးန...